News in Shona 18/05/06 - The Zimbabwean
HARARE - Gore ratokwana kubva pakapazwa dzimba dzevanhu uye kuparadzwa kwezvaipa vanhu kurarama asi zvinoshamisa kuti vanhu veZanu (PF) havana nyadzi dzekuuya muBudiriro vachichemera mavhoti evanhu.
Izvi zvakataurwa nemutungamiri weMDC apo
aksangana nemhomho yevanhu muBudiriro achivakurudzira kuti vavhotere VaEmmanuel Chisvuure pasarudzo yesvondo rino.
MuBudiriro hamusati mamboita musangano wakawanda vanhu sewemusi iwoyo, uye vaTsvangirai vakaudza vanhu kuti vabude kuitira kuti vasvitse shoko kuZanu (PF) rekuti haichadiwi muBudiriro.
“Pavanhu gumi vanoda basa, vapfumbamwe havana basa sezvo makambani ari pakati pekuvhara, asi Zanu inokatyamadza nekusanyara kwayo, kuuya muno ichiti tivhoterei.
Iyo nzara yakatopinda munyika kare nokuda kwekutadza kwayo Zanu kuronga nezvekurima kwevanhu, asi mutungamiri wenyika Mugabe achiramba kuti kune nzara.
Hakuna munhu ane chokwadi angaramba kuti Zimbabwe itori parumananzombe panyaya yezhara,” vakadaro vaTsvangirai.
VaTsvangirai vakaudza mhomho yaisvika zviuru makumi maviri kuti basa raVaChisvuure raiva rekubatanidza vanhu vemuBudiriro nekuvatungamira kuti vachipinda mudariro rekurwisa kuti vabvise Mugabe pachigaro.
Vakashorawo kuunzwa kwaiitwa vanhu kuBudiriro neveZanu (PF) nemakombi kuti vazokonzera nyonganyonga vachirova vanhu veMDC. Izvi zvakaitika musi weChishanu svondo rakapera.
VaTsvangirai vakasvitsawo shoko kumasoja, mapurisa nemaCIO rekuti basa ravo raiva rekuchengetedza vanhu kuvavengi vekunze, kwete kuvarova, pamwe chete nevabereki vavo ivo. Vakati, “Basa renyu rinokosha, uye mufanirwa kudada naro nokuti ndimi munochengetedza vanhu. Rambai makadaro.”
Vakaenderera mberi vachiti sezvo vaigara mumaguta pamwe chete nevanhu, vamwe vari maroja, vamwe vane dzimba dzavo, vakange vari nhengo dzemumisha imomo mavaigara, saka vaisafanirwa kushandiswa neZanu (PF) kana kubvuma kuitwa zvikorobho zvaRobert Mugabe nehurumende yake yehuwori. Vakavaudzawo kuti vashande nevanhu sezvo vaingotamburawo nevanhu pasina chavanowana kubva kuZanu (PF).
HARARE – Musi wa18 Chivabvu (May) gore rakapera ndiwo musi wakatarisa vanhu vekuHatcliffe vachishamisika kuti izvi zvaiitika zvechokwadi here apo mabhurudhoza (bulldozers), masoja nemapurisa vakapinda mumusha mavo, vachipwanya dzimba huruva ichituguka. Pakasara mirwi yezvitinha, simbi nemagirazi chete.
Vamwe vakagara pamusoro pedzaimbova dzimba dzavo vachichema, vamwe vachiedza kuwona kuti chavanganhonga chii pazvinhu zvavo. Mazuva akatevera mabhurudhoza akaramba achishanya munzvimbo dzose dzemumadhorobha dzaigara vanhu-Murambatsvina, iyo yaiva pfungwa yaVaMugabe yekupfidzisa vanhu vakange vavhotera MDC musarudzo yemuna Kurume (March).
Apa ndipo pakatanga chirongwa chekuparadza dzimba dzainzi hadzina kuvakwa pamutemo. Hapana chakasara, mabhurudhoza asina zvekuti uyu mutengesi ane tsamba dzake here dzekutengesa kana kuti haana. Vose vaingosungwa vachibvisiswa mari nekutorerwa zvinhu zvavo izvo zvavakange vatotengawo kuti vagozotengesa.
Chero misika yakange yavakwa neminisiparati ichinzi ndeyevanhu yakapunzwa, zvese izvi zvichinzi zvakanangana nekubata mbavha nemakororo.
Asi vanhu vazhinji vakabatwa munyaya idzi vakange vasiri vanhu vehutsvina kana kuti mbavha nemakororo, asi kutoti vaivawo vanhu vakangobatanidzirwa muzvirongwa zvehurumende yakange isisazivi zvayaiita, ichipwanyira vanhu vaitozvitamburirawo havo kuti vakudze mhuri dzavo munguva yakawoma.
Murambatsvina yakazomwararira munyika yose kusvika muna Chikumi (June) zvasvikawo kuKillarney nekuNgozi Mine uko kwakaita zvekuparadzwa dzimba dzose dzaigara vanhu.
Apa ndipo chando pachakabva chanyatsotanga, zviuru nezviuru zvemhuri zvichigara panze pamoto, vana vachirohwa nemhepo. Dzimwe mhuri dzakatopisa midziyo yemumba kuti varambe vachidziyirwa, vamwe vana vazhinji vakatorwara vakafa.
Vemasvondo vakatorawo vavakakwanisa, ndokuvapa pokumboduka nechikafu chekuti vararame, asi masoja akatumwa zvakare kuzovabvisa munzvimbo idzi, ndokunovakanda kumasango kwekuti vasawonekwa nevanhu, asi kwakange kusina dzimba, kana matende zvawo, mvura, nechikafu, kana mishonga kana zvimbuzi.
Chinguva chishoma chichangopfuura zvuru vanhu ava vakazobviswa zvekare ipapo ndokunokandwa nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, ndokuudzwa kuti ngavaende kumaruwa kwavo, pasina kumbotariswa kuti vanako here kwekuenda, sezvo vazhinji vavo vakange vari vagari vemudhorobha vasina kana dzimba kumaruwa.
Nhasi uno, gore ratopera, asi vazhinji vavo vachikungogara panze, icho chando chadzoka zvekare. Havachina hama neshamwari kana nzira dzekuzviriritira nadzo.
Dzimwe nguva vanorambidzwa kana kuviga hama dzavo dzinenge dzafa, ivo vanhu vachifa kana vaviri pasvondo munzvimbo idzi, kazhinji kacho vari vana vadiki.
Vazhinji vane zvirwere zvinozowedzerwa nemukondombera nekushaya kudya kune hutano nekunovaka muviri. Vana vakawanda havachaendi kuchikoro.
Chero zvazvo sangano renyika dzepasi rose (United Nations) rakazvishoropodza hurumende yaMugabe inongoita zvainoda, isina kana kumbofunga kaviri nezvazvo.
Zvisinei, masangano evanhu akazobatana kuti kuitwe hurongwa hwekurangarira zviitiko izvi pamasvondo mashoma anotevera kuitira kuti zvisazombofa zvakakanganwikwa zvekare. – Own correspondent
Tsamba Iri Pachena Kuna President Mugabe
Panguva ino yekuvhurwa kwezvikoro nekutanga kunyorwa kwebvunzo, isu vebato revadzidzi reZINASU tiri kunetsekana nekuwona kusagadzikana kwakaita vadzidzi munyika nokuda kwemari yechikoro.
Vana vechikoro tiri mukutambura pamwe chete nevanhu vese munyika nokuda kwekuwoma kwezvinhu. Kuwedzera mari yechikoro zvakanyanya sezvakaitwa zvinowedzera kurwadzisa vanhu vagara vasina mari nakare.
ZINASU inoti kuna VaMugabe ngavambodzokera kumashure apo vaitaura Zimbabwe isati yave nekuzvitonga kuzere vachiti fundo pachena ikodzero isingafaniri kumbotorerwa kana ani zvake, uye kudzero iyi yaifanirwa kutochengetedzwa mubumbiro remutemo.
Tinozivisa VaMugabe kuti takabvumirana pamusangano wedu mukuru kuramba mari dzakakwidzwa idzi nokuti kukwidzwa kwacho hakuna zvikonzero uye kudzokera kumashure kunguva yeRhodesia.
ZINASU yakambokumbira gurukota rezvedzidzo kuti riburitse pachena kuti vadzidzi vasati vabhadhara mari dzavo vachabvumirwa here kunyora bvunzo uye vachawana here magwaro avo edzidzo kana kuti kwete.
Tinozivisawo gurugota redzidzo kuti hatisi kuzoenda kuchikoro kubva musi waChivabvu 22 kana nyaya yemari isina kugadziriswa.
Tinoshushikana kuzivisa VaMugabe kuti musi weChina Chivabvu 4, mapurisa akasunga zvisiri pamutemo makumi mashanu evatungamiri vevadzidzi pamusangano wedu mukuru; vose ava vakazoburitswa pasina nyaya yavakawanirwa.
NeMuvhuro wakatevera kuBindura, vamwezve makumi mashanu nevatanhatu vakavharirwa, vachirohwa, nekunyimwa chikafu nemvura kana mukana wekuwona gweta.
Izvizvi zvinoratidza kuwedzera kwakanyanya kwehudzvinyiriri hwevadzidzi avo vanenge vachida kungotaura chete zvinovanetsa. Tava kutofunga kuti hurumende haichamiriri zvido zvedu.
Tinokumbira President kuti vashandise masimba avo, kuudza gurukota remapurisa neredzidzo nemukuru wemapurisa kuti vasiyane nezvekusunga nekushusha vadzidzi.
President ngavapidigure kudzingwa nekumbomiswa kwevadzidzi vairatidzira murunyararo nenyaya yekuwomerwa kwavaitwa.
Promise Mkwananzi, President, Zimbabwe National Students Union.